♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: ပွင့်တဲ့ ပန်းတိုင်း လန်းစေချင်
ပွင့်တဲ့ ပန်းတိုင်း လန်းစေချင်
အခု ချမ်းချမ်းပြောမဲ့ အကြောင်းအရာလေးက အတင်းအဖျင်း အနေနဲ့့တစ်ဖက်မိန်းမသားကို...နှိမ်ချင်လို့အထင်သေးလို့ မဟုတ်ဘူးနော်..ယောကျာ်းလေးတွေကို.အထင်သေးလို့ လဲမဟုတ်ဘူး..ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတွေကို..မိန်းကလေးတိုင်း..သိသင့်တယ်ထင်လို့ ..ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့ ..မျှဝေတာပါ..ပတ်ဝန်းကျင်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာပေါ့...ဘ၀ပျက်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာလမ်းဘေးရောက်သွားမှ
ဘ၀ပျက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူမသိဘဲသိမ်ငယ်သွားတာ၊အမြဲအားငယ်သွားတာ၊စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရတာတွေ ...ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယုံကြည်မှုတွေ..နည်းပြီး..နောင်တတရားနဲ့ ရင်မှာပူလောင်နေတာဘ၀ပျက်မတက်ပါဘဲ၊ဒါက ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားခဲ့ရင်ပေါ့..တန်ဖိုးမထားတဲ့မိန်းကလေးအတွက်တော့..ဒီကိစ္စတွေက..ထူးဆန်းလိမ့်မယ်မထင်ဘူး...
အခွင့်အရေးပိုယူတဲ့ ချစ်သူအပေါ်..ကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ.သူကငါ့ကိုသိပ်ချစ်လို့ အခွင့်အရေးတောင်းတာများထင်နေလားတော့မသိဘူး...အချစ်နဲ့ ရမ္မက် ကတခြားဆီပါ..
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးပါ.သူကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တွဲတယ်တဲ့ နောက်တော့
...***(Every Men Has His Price)***တဲ့ ...သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Profle ထဲမှာရေးထားတာတွေ့ မိတော့..ချမ်းချမ်းစဉ်းစားမိသွားတာက..ယောကျာ်းလေးတိုင်းသူ့ တန်ဖိုးနဲသူရှိရင်..စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတာလဲ.ရှိနေရပါမယ်..
သူ့ ချစ်သူကိုယုံကြည်လို့ .ချစ်သူငြိုငြင်သွားမှာကြောက်လို့ ..အလိုလိုက်မိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့််မယ်...(ဒါက အယုံလွယ်ပြီး..အားနာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ..ကိုပြောာတာနော်..)
ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊ပြန်ပြင်လို့ ကောရပါ့မလား...ဘယ်သူကိုမှ မမှားစေချင်ဘူး....
နောက်တော့..ကောင်မလေးက ကြာရင်အရှက်တကွဲ.အကျိုးနည်းဖြစ်မှာကြောက်လို့ .ချစ်သူကောင်လေးကို.မိဘတွေဆီမှာ..လာတောင်းခိုင်းပါတယ်.
ဘ၀သင်ခန်းစာကို..ကိုယ်တိုင်ကြုံမှယုံမှာလား......သူများကြုံခဲ့တာတွေကို. ကြည့်ပြီး.ရှောင်သင့်လားဆိုတာ.ကိုယ့်ဘာသာ..ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နော်..လူဆိုတာကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ လမ်း..ကိုယ်ဘဲလျှောက်ရတာပါ.
ကျေလွယ်နွမ်းလွယ်တယ်လေ..ပြီးတော့မိန်းခလေးဆိုတာ မှန်တချပ်နဲ့ တူတယ်ကွဲရှမခံနိုင်ပါဘူး ကွဲကျခဲ့လို့ ဆက်လို့ရရင်တောင်အက်ကြောင်းနဲ့ပါ၊ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တွေးကြည့်ပြီးမှ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်
ပါ၊ချစ်သူကို..နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပုံပြီးချစ်ပါ..ဘ၀တစ်ခုလုံးတော့.ယုံမှတ်လို့ .ပုံပြီးမအပ်လိုက်ပါနဲ့ ..
ချစ်တဲ့ သူနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ သူ.တစ်ထပ်တည်းမကျခဲ့ရင်...ယောကျာ်လေးထက်ကို..မိန်းကလေးက..ပိုနစ်နာတယ်..
ကိုယ့် ဘ၀ ကို.ကိုယ်တိုင် ကတန်ဖိုးထားမှ..သူများက ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးးထားမှာပါ...
လို့ရနိုင်အောင်ပါ။ဘယ်တော့မှ ရေမှာ အရုပ်မရေးမိပါစေနဲ့၊တနေ့ ဆိုတာ
လောကမှာ..လိမ်ခံထိတဲ့ သူ ၃ မျိုးရှိတယ်..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ..မိမိရဲ့ဘ၀..သိက္ခာ..ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ .ပက်သက်လာရင်..ဘယ်သူ့ ကိုမှ အယုံမလွယ်ပါနဲ့ .
အားလဲမနာပါနဲ့ ..ကိုယ့်ကို ကိုယ်..တန်ဖိုးထားမှ..သူများလဲ.ကိုယ့်ကို..တန်ဖိုးထားမှာပါ..သူများကဲ့ ရဲ့ တာထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို..မကဲ့ ရဲ့ မိပါစေနဲ့ ..တစ်နေ့ မှာ.မြင့်မြတ်တဲ့ မိခင်ဘ၀ရောက်မယ့်..မိန်းကလေးတိုင်း.ဟာ..အရွယ်ရောက်တဲ့ ကိုယ့်သမီးတွေကို.ဆိုဆုံးမနိုင်ဖို့ အတွက်
..ကိုယ်တိုင် က..သူတို့ လိုအရွယ်မှာ..အပြစ်ကင်းအောင်နေသင့်ပါတယ်..အမှားနည်းအောင်လဲ..အရာရာဆင်ခြင်၇ပါမယ်.
(ပွင့် တဲ့ ..ပန်းတိုင်း..လန်းကြပါစေ.....).
သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ Credit လေးတစ်ခုဟာ စာရေးသူတွေအတွက် .တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဆောင်လေးပါ.
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 4:58 AM